Joyina amabutho nabanamandla, kukhethwa kulo mshini ukwaluka
Ngenxa ibhizinisi okujwayelekile abahlelela amaShayina hose ukwaluka umkhakha, Benfair Technology iye njalo walondoloza indinganiso ephakeme nezimfuneko esiqinile ngokwa futhi kusukela ngalesosikhathi iye yaqhubeka silondoloze ulaka yayo.
Inkampani ngenkuthalo iqhaza emisebenzini ezihlukahlukene emakamelweni wendawo kwezentengiselwano, ngenkuthalo uhlanganyela ezihlobene yokukhiqiza yasendaweni zokucwaninga ngokubambisana nokuthuthuka, nezenhlalakahle, njll, futhi isekela nomunye nabangani wendawo kanye nosomabhizinisi. Xinchang itholakala engxenyeni esempumalanga Zhedong futhi evuthiwe embonini. Kukhona izinkampani eziningi kakhulu yokukhiqiza endaweni futhi Benfax ngenkuthalo ibambisane nabo ukuthuthukiswa ezivamile.
Esikhathini isici supply chain ukuhlanganiswa, Benfair Technology izonikeza umbono oluphelele yezwe nokubambisana abahlinzeki kakhulu kuzo zonke izici izwe ukuqinisekisa ukuthi nokweluka imikhiqizo umshini etholwe amakhasimende ephelele. Phakathi kwabo, kukhona izinkampani eziningi ezifana Siemens eziye wabambisana Benfair Technology, futhi Benfair ephikelela ukwamukela uhlelo lokulawula ikhompyutha Siemens 'isikhathi eside ukuqinisekisa ukusebenza ozinzile futhi ezinhle kulo mshini ukwaluka e kusetshenzwa.
Ngokomthetho, kulobu buchwepheshe sibizwa futhi ngokuzikhandla enqoba izinkinga ezihlukahlukene yezobuchwepheshe. Kusukela wire yasekuqaleni insimbi engagqwali wire ukwelukwa lomshini izinhlobo zamanje ezihlukahlukene carbon fibre esiyinhlanganisela izinto nezinye izinhlobo eziyinkimbinkimbi imishini ukunitha impahla, futhi wamanje ekhethekile ijabulise imishini ukunitha kusenziwa lubonisa ithuthukiswe, Benfair akazange alilahle ithemba ukuphishekela amaphupho. Lwela abe brand China lokuqala ukwelukwa imishini high-speed. Ngesikhathi esifanayo, ukuze uthuthukise ulwazi kangcono amazinga yenkampani lobuchwepheshe, Benfair Technology futhi ibambisane Zhejiang University of Science and Technology kanye nezinye izikhungo eziningi zemfundo ephakeme ukuthuthukisa izinhlobo ezintsha umshini ukwaluka ubuchwepheshe. amakolishi Abaningi namanyuvesi futhi ukusebenzisa lobu buchwepheshe njengenye umkhuba lezisekelo inkosi yazo. Minyaka yonke, bathumela iqembu lobuchwepheshe backbone amathalenta Benfa Technology, ukunika amandla Benfa Ubuchwepheshe ukuze uthole igazi fresh njalo ngonyaka.
Kuyinto ebambisene nezinkampani ezikhona endaweni, ezifuywayo international oluvelele namanyuvesi ezinkulu eyenza lobu buchwepheshe ukuze zidlule kweminyaka eminingi kangaka. Lo mshini ukwaluka onganqoba idumela elihle ekhaya aphesheya nge imikhiqizo emihle. .
isikhathi Iposi: May-07-2018